ကြက်ကြော်ရောင်းပါသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်ကြော်ရောင်းပါသည်။
Posted by စဆရ ကြီး on Jan 31, 2013 in Food, Drink & Recipes | 27 comments
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တော့ ကြက်ခေါင်းကြီးလားထင်နေတော့မယ်။ မထူးတော့ပါဘူး၊ အားလုံးလဲသိနေကြပြီမို့ ကြော်ငြာလေးတော့ ၀င်လိုက်ပါရစေဦး။ ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော်ကြက်ကြော်ရောင်းပါသည်။
ဘယ်မှာလုပ်သလဲဆိုတော့ KFC မှာ လုပ်ပါသည်ပဲပေါ့။ KFC ဆိုတာ ဘာလဲ မသိကြသူတွေထဲမှာမှ လက်ရှိအလုပ်လုပ်ရန် လာရောက်ကြသော ၀န်ထမ်းများကို Introduction လုပ်ပေးရသည့်ထဲမှာ ကျွန်တော်လဲ အပါအ၀င်ဖြစ်သဖြင့် ၄င်းတို့ အသီးသီး ဖြေကြားကြသည်များမှာလည်း မှတ်သားစရာကောင်းလှပေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ KFC ဆိုတာ ဘာလဲဟု မေးလိုက်လျင် ဖြေကြသည်မှာ ကူဝိတ် ဖုဒ် ကုမ္ပဏီ လို့ပြောကြပါသည်။ လုပ်သက်အနည်းငယ်ရလာသောအခါ Kairo Food Company (အီဂျစ်လူမျိုးများ ရာထူးကြီးကြီးယူထားသောကြောင့် အီဂျစ်မှ မြို့တစ်မြို့နာမည်) ဟုပြောကြပါသည်။ တစ်နှစ်ခွဲခန့်ကြာပြီးသည့် ၀န်ထမ်းများကို ပြန်မေးလျင်တော့ Kitchen Fucking Company ဟု ဆိုကြသည်ကို မှတ်သားဖွယ်ရာ လေ့လာသိရှိရလေသည်။ ၀န်ထမ်းမလောက်မငှဖြင့် လည်ပါတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ကျန်ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ကိုသာ နာနာထောင်းနေရသဖြင့် စိတ်နာနာဖြင့်လဲ ပြောကြခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ်မှာတော့ Kentucky Fried Chicken ကို အတိုကောက်ခေါ်ခြင်းလဲဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာတော့ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟာလန်ဆန်းဒါးမှာ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် သစ်ဥသစ်ဖု ၁၁ မျိုးကို ရောစပ်ပြီး ကြက်ကြော်နည်းစနစ်သစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာမှ လုပ်ငန်းခွဲများစွာကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာရာ ယခုအချိန်တွင်မတော့ (၂၀၁၁ ခုနှစ်စစ်တမ်းများအရ) ကမ္ဘာတစ်လွှား နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၅ နိုင်ငံတွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော်ကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီးလဲ ဖြစ်သည်။ အများစုမှာ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် တရုတ်ပြည်တို့တွင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သည်ကား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ဈေးကွက်လျင်မြန်စွာ ကျယ်ပြန့်လာသော နိုင်ငံတစ်ခုလဲဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံးတို့များ အခန့်သင့်လျင်တော့ သွားပြီး အလုပ်လုပ်ချင်သေးတော့သည်။ ဒီနေ့မှ ဟောင်ကောင်သားအူးကျောက်နှင့် အရှေ့ကျွန်းမှ နှူးဘာဂီတို့က တရုတ်ရေအိုးများ အလွန်ဝိုင်းကြောင်း ပြောသည်ကို ဖတ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။(စကားချပ်) KFC မူပိုင်ခွင့်ကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်မှာတော့ YUM! International မှဖြစ်သည်။ ၄င်းမှတစ်ဆင့် မူပိုင်ခွင့်များ ထပ်ဆင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့အလည်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုတော့ ကူဝိတ် ဖုဒ် ကုမ္ပဏီ(အမေရိကားနား) မှ မူပိုင်ခွင့်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတွင်မတော့ ယခင်နှစ်က ၇၆ ဆိုင်သာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင်မတော့ ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၀ တိတိထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အတွက် လာမည့်အပါတ်တွင် ယခင်က ၂၁ ကျပ်ဖြင့်ရောင်းနေခဲ့သည့် ဘာဂါ+ကြက်ကြော်တစ်တုံး+ပေါင်မုန့်တစ်လုံး+အာလူးကြော်တစ်ထုပ်+Coleslaw+Pepsi တစ်ခွက်တို့ကို ၁၅ ကျပ်မျှဖြင့်ရောင်းပြီး အောင်ပွဲလဲခံရင်း၊ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးလဲ လုပ်ဦးမည်ဖြစ်သဖြင့် ကိုရင်ရှူံးတို့မှာ မျက်ခုံးခပ်လှုပ်လှုပ်ပင်။ KFC ဆိုသည်မှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်မတော့ လူပေါင်းများစွာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်း ၀ယ်ယူစောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို အမြဲမြင်ရသည့် အသင့်စား စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ယခုလို အရောင်းမြှင့်တင်ရေးရှိသည့်အခါတွင်မတော့ ကိုရင်ရှူံးတို့မှာ ယားလို့တောင် ဘယ်နေရာမှ ကုတ်မအားနိုင်အောင် ဖြစ်ရပေတော့မည်။ ရှိစေတော့၊ အလုပ်ပေမို့လုပ်ရပေမည်။
ကြုံတုန်း အလျဉ်းသင့်သဖြင့် ပြောပြရမည်ဆိုလျင် ကိုရင်ရှူံးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကြက် လုပ်ငန်းကြီးမှာ(မြန်မာပြည်မှ ဖိနပ်စီးသည့် ကြက်များကို မဆိုလို) နှစ်စဉ် တိုးတက်နေသော ကောင်းမွန်လှသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည်။ လူမျိုးအတော်များများ မရှောင်သည့် အစားအစာလဲ ဖြစ်သည်။ (ဒီနေရာတွင် သားသတ်လွတ်သမားများမပါ) ထို့အတွက်ကြောင့် အတော်လေးလဲ လူမျိုး၊ဘာသာမရွေး စားသုံးနိုင်ပါသည်ပေါ့။ မွှတ်စ်များနေထိုင်သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် ဟာလာဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ ထောက်ခံစာ ယူထားရသေးတော့သည်။ ယခုနှစ်တွင်မတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း စစ်တမ်းကောက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို သီးသန့်လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အလုပ်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်ရသည်မှာ မက်ဒေါနယ် ဘာဂါဆိုင်နှင့်ဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းကောက်မည့်သူများမှ အထက်ဖော်ပြပါ ဆိုင်အသီးသီးသို့ သွားရောက်ခြင်း၊ ဖောက်သည်ဟောင်းများ (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖောက်သည်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်သွားသူများ) ကို မေးမြန်း၊စစ်တမ်း ကောက်ယူကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်များမှာ အထူးပင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပေသည်။ အများစု မဲပေးကြသည်မှာ မက်ဒေါလ်နယ်ဖြစ်သည်ကို အံသြစရာကောင်းစွာ (ကိုရင်ရှူံးတို့တော့ မအံ့သြပါ) တွေ့ရတော့သည်။
အောက်ပါအချက်များမှာ ဆန်းစစ်ချက်များမှ အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်များဖြစ်သည်-
ကမ်တပ်ကီသည် အဘိုးကြီးပုံကို သုံးထားသဖြင့် ရှေးဟောင်းနည်းပညာသာဖြစ်သည်။
မက်ဒေါလ်နယ်မှာတော့ သူတို့၏ လိုဂိုအတိုင်း အမြဲဆန်းသစ်နေသဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ (မက်ဒေါလ်နယ်မှ Breakfast ကို မိတ်ဆက်ထားသည်၊ ကိုရင်ရှူံးတောင် ကြိုက်ပါသည် )
ကမ်တပ်ကီသည် ဆိုင်၏ အပြင်အဆင်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ မပြင်မဆင်ပဲ ထားသည့်အတွက် ဆန်းသစ်မှုကို မခံစားရ။
မက်ဒေါလ်နယ်သည် ဆိုင်၏အပြင်အဆင်ကို နှစ်တိုင်းလိုလို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။
ကမ်တပ်ကီမှ ၀န်ထမ်းများသည် အချင်းချင်းသာ ခင်ခင်မင်မင်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိကြပြီး ဖောက်သည်များနှင့်မူ ၀တ်ကျေတမ်းကျေသာရှိကြသည်။
မက်ဒေါလ်နယ်မှာတော့ ၀န်ထမ်းများမှာ ပြုံးရွှင်ချိုသာကြပြီး ဖောက်သည်များကို ၀န်ဆောင်မှုပေးရန် အားတက်သရောရှိကြသည်။
(ဒီနေရာတွင် ကိုရင်ရှူံးဝန်ခံပါ၏။ ကေအက်ဖ်စီစားသုံးသူ ရေးခဲ့သည်ကို ဖတ်မိသူများတော့ သိမည်ထင်၊ ကိုရင်ရှူံးရေးခဲ့သလို အရောင်းစာရေးမများကို ၀န်ဆောင်မှုအကြောင်း နားလည်အောင် မည်မျှပင် သင်ကြားပေစေငြား မလောက်ငှသော ၀န်ထမ်းအခြေအနေကြောင့် အရောင်းစာရေးမများမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတော့ ရှိနေသည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ နောက်မှထုပ်ပိုးပေးမည့်သူမရှိသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဖောက်သည်ကို ဖော်ဖော်ရွေရွေ မနှုတ်ဆက်မိမည်ကို စိုးသည်ကတစ်ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားမှ ၀န်ဆောင်မှုညံ့ရမလားဟု အပြစ်တင်မည်ကတစ်ကြောင်း၊ အကြံပြုရောင်းချခြင်း (Suggestive Selling) မပြည့်မှီမည်ကတစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ၀န်ဆောင်ချိန် စုစုပေါင်း ၅ မိနစ်အတွင်း အမှာစာ မပြည့်စုံမည်ကို စိုးသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် အရောင်းစာရေးမများ အပြုံးတွင် အသက်မပါနိုင်ပေ… အတွေ့အကြုံကို ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်)
ကမ်တပ်ကီမှ အာလူးကြော်သည် ဆီရွှဲနေပြီး စားသုံးရာတွင် ကြွပ်ရွခြင်းမရှိပေ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားချင်လျင် ဆိုင်သို့သာသွားစားရပေမည်။
မက်ဒေါလ်နယ်မှ အာလူးကြော်မှာ ဘယ်အချိန်စားစား အရသာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးပုံကောင်းသောကြောင့်လဲ ဖြစ်ပေမည်။
(ဒီနေရာတွင် ကိုရင်ရှူံးအတွေ့အကြုံကို ပြောရမည်ဆိုလျင်ဖြင့် ကမ်တပ်ကီဆိုင်မှာ ဈေးသက်သာမည်ဟုထင်သော အာလူးချောင်းများကို အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်သုံးစွဲနေခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဟော်လန်မှ၊ တစ်ခါတစ်ရံ အီဂျစ်မှ၊ တစ်ခါတစ်ရံ အီရန်မှ အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်နေခြင်း၊ အကြော်ဆီများကို ဈေးသက်သာနိုင်သမျှ သက်သာသည်များမှ ၀ယ်ယူပြီး သက်တမ်းကို မရမက ဆွဲဆန့်ကြော်လှော်ခိုင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်မည်ထင်သည်။)
ကမ်တပ်ကီမှ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ စနစ်တကျမရှိပဲ အားလုံးရောနှောပြန့်ကျဲနေခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ခရမ်းချဉ်သီးနှစ် အထုပ်လေးများ ကျန်နေသည့်အတွက် ပြန်လည်တောင်းနေရခြင်း။
မက်ဒေါလ်နယ်မှာတော့ ထုပ်ပိုးပုံမှာ စနစ်ကျနလှသည့်အပြင် စုစုစည်းစည်းလဲရှိပေသည်။
ကမ်တပ်ကီမှာ အများပြည်သူ စားသုံးနိုင်သည့်ဈေးရှိခြင်း၊ မိသားစုအလိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းနှင့် မကြာခဏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးများ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖောက်သည်များမှာ အမြဲစိတ်ဝင်တစားရှိခြင်း။ ကြက်ကြော်စားခြင်းသည် ဘာဂါစားခြင်းထက် ငွေကုန်ကျေးကျ သက်သာပြီး ဗိုက်ပြည့်လွယ်ခြင်း။
မက်ဒေါလ်နယ်သည် ဘာဂါတစ်ခုချင်းစီဈေးနှုန်းသာရှိပြီး မိသားစုအလိုက် (Family Pack) များမရှိခြင်း၊ ဘာဂါတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဈေးနှူန်းမှာ ကြက်ကြော်ဈေးနှင့်ယှဉ်လျင် များသည်ဟု ဆိုနိုင်ခြင်း။
အစရှိသည့် ကြောင်းကျိုးလျော်ညီသော ဆန်းစစ်မှုများကို ဖတ်ရလေသည်။
ရေးရင်းရေးရင်းနှင့်ပင် ကိုရင်ရှူံးဆိုလိုရင်းပျောက်ပြီး ကြော်ငြာဝင်သလို ဖြစ်နေတော့မည်။ လိုရင်းမှာ ကြက်ကြော်စားကြဦးမလားဟု တွေ့မိသည့်အတွက် ကြက်ကြော်ရောင်းနေပါသည်ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုရင်စိုင်းတို့ ကြက်ကြော်ရောင်းနေရသူများအဖို့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်စေရန် ကြက်ကို ဆိုင်ရောက်မှ လည်လှီးသတ်၊ ခုတ်ထစ်ကြော်လှော်ကြသည်ဟု ထင်ကြပေမည်။ တစ်ခါများက မြန်မာတစ်ယောက်ဆီ သွားလည်သည့်အခါ ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာ လုပ်သည်ဆိုသည့်အတွက် ကြက်ကို ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပြီးမှ ပြန်ကြော်တာလား မေးကြပြန်သေးသည်။ တစ်ကယ်တော့ အပူချိန် ၃၄၀ံဖာရင်ဟိုက်ရှိသည့် စက်ထဲတွင် ဆီပူပူထဲမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ၁၄ မိနစ်ခန့် ကြော်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းသဘာဝကို ရှင်းပြမှ ဖြစ်ပေမည်။ ကိုရင်ရှူံးတို့ဆိုင်သို့မရောက်မီ Commisary ဌာနသို့ နှစ်ရက်အလိုတွင် အမှာစာမှာရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဌာနမှ အမှာစာရသည်နှင့် ဘရာဇီးမှ ရေခဲရိုက်ပို့ထားသော ကြက်သားထုပ်များကို ရေတွင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေပြီး Thawing လုပ်ရသည်။ ထိုသို့လုပ်ပြီးနောက် အသင့်ခုတ်ထစ်ထားသော ကြက်သားတုန်းများကို အစပ်အတွက် အစပ် Marination (အရသာပေါင်းခံခြင်း)၊ အချိုအတွက် Marination လုပ်ခြင်းတို့ပြီးသောအခါ သတ်မှတ်ထားသည့် ထုပ်ပိုးပုံစံများတွင် ထုပ်ပိုးပြီး အမှာစာအတိုင်း ဆိုင်များသို့ ပို့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကြက်တစ်ကောင်လုံး ခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်ပြီးသည်မှ ၉ ကျပ်ခန့်သာကျလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မတော့ အရွယ်လတ်လတ် ကြက်တစ်ကောင်မှာ ၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည့်အတွက် မည်မျှ ကွာခြားသလဲ ကြည့်ကြပါကုန်။ 1 ဒါဟန်း = ၂၃၁ ကျပ် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထိုကဲ့သို့ ရေခဲရိုက်ကြက်သားများ ၀င်လာပါက မြန်မာပြည်သူများလဲ နိုင်ငံတစ်ကာမှ လူများနည်းတူ အာဟာရပြည့်စုံစွာဖြင့် ဈေးသက်သက်သာသာ စားသုံးနိုင်ပြီး သန်မာထွားကျိုင်းသောသူများလဲ ဖြစ်လာပေမည်။
တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ နိမ့်နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းသည့်အတွက် အဖက်ဖက်မှ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ထိုးတက်နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဘာသာရေးအရ ဘာဖြစ်သည် ညာဖြစ်သည်ပြောကြသူများကြောင့်တစ်ကြောင်း မြန်မာတွေ အသားသိပ်မစားကျ၊ သိပ်လဲမစားနိုင်၊ မစားနိုင်တော့ သိပ်ပြီးတော့ မွေးမြူရေးတွေမလုပ်ကြ၊ မလုပ်ကြတော့ ရှားပါး၊ ရှားပါးတော့ ဈေးတွေကတက်၊ ဈေးတွေကတက်တော့ လစာက မလောက်၊ မလောက်တော့ မစားနိုင်၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ လိပ်ပါတ်လည်နေတော့တာပါပဲ။ ကိုရင်စိုင်းမြင်ဖူးသလောက် နိုင်ငံများကတော့ အပြင်စာတွေမှာ အရသာပိုရှိပြီး မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်မှာချက်တာထက် ပိုအရသာရှိပြီး ဈေးလဲသက်သာတာကြောင့် အိမ်မှာ ကရိကထခံပြီး သိပ်မချက်ကြတော့ပေ။ ဆင့်ကာပူရမှ မန်းလေးသူ တရုတ်မကြီးများသိပါသည်။ မလေးစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်မတော့ တစ်နပ်ကို ၂ ကျပ်မျှဖြင့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲ စားနိုင်သေးသည်။
ကိုရင်ရှူံးလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီးမပျက်တော့သည့်အချိန်တွင် အအေးခန်းကြီးများဆောက်၊ အကောက်ခွန်များကို ကျသင့်သည့်အခွန်ထက် ခွံ့နေရသည်များ ကင်းပျောက်သည့်အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသူ/ နိုင်ငံသားများ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေများ မြင့်မားလာသည့်အချိန်၊ မီးမထွန်းပဲ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး လျှပ်စစ်မီးများ ပေါများလာပြီး ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားပြီး အစိုးရကြွေးများ ကျေအောင်ဆပ်နိုင်ပြီးသည့် ထမင်းတစ်နပ်သာ စားရသည့် တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများကို ဈေးသက်သက်သာသာဖြင့် နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မှီ ကြက်ကြော်များကို ဖောဖောသီသီ ရောင်းချနိုင်မည့် နေ့တစ်နေ့ ရောက်လာမည်ကို မျှော်လင့်ရင်း…
ကိုရင်ရှူံး ကြက်ကြော်ရောင်းနေပါသည်ပေါ့။ ။
ဟီး ဟီး ရွာထဲမှာ ကြက်ဇတ်လမ်းတွေခေတ်စားနေပါလား…
ပြောရရင် ဦးကျောက် အခုထက်ပိုဝိတ်တက်မှာစိုးလို့…
JUNK FOOD ဆီများတဲ့အစာ ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ပါတယ်…
စလုံးမှာနေတုံးက ကျောင်းလာတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့သား KFC မှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်တော့…
ဆိုင်သိမ်းလို့ အိမ်အပြန် သူယူလာတဲ့ ကြက်ကြော် ဘီဘီနဲ့ ဆွဲတာပေါ့ဗျာ….
သူ့မှာတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ဆီနံ့တွေစွဲလို့….
အူးကျောက်ပြောတာ မှားနေတယ်ဗျ… တစ်ကယ်တော့ ဆီနံ့မဟုတ်ဘူး၊ ကြက်ကြော်နံ့ဗျ… တော်ရုံနဲ့ မပျောက်ဘူး.. ၀ိတ်တက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွင်းအစာချေစနစ်နဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်… ကျွန်တော့်လုပ်သက်အတွင်းမှာ ၃/၄ နှစ်လောက်လုပ်ရင်း ဒီဟာပဲစားနေတာတောင် နဂိုအတိုင်း ပိန်ညောင်နေသူတွေလဲ မြင်ဖူးပါရဲ့…
ကြုံတုန်း လူသိရှင်ကြားမေးဦးမယ်… ဟောင်ကောင်က ရေအိုးတွေရော တော်တော်ဝိုင်းလားဟင်
မနေ့က ပို့(စ) ကိုဖတ်ပြီး ကြက်သားမစားချင်စိတ် ပေါက်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေချိန်မှာ ဒီ ပို့(စ) ဖတ်ပြီး ဒီနေ့လည်စာတော့
ဒီ ဟာ ကို မှာ စားရမလား ဂရောင်ဂရင် ဖြစ်သွားပေါ့။
ကျနော်ကတော့ အသားဟေ့ ဆိုရင် စစ်သားရယ်၊ သစ်သားရယ်၊ အဲ! ကျောင်းသားရယ် ပဲ ရှောင်သူမို့…….
“စားမှာ ပဲ၊ စားမှာ ပဲ၊ နာ့ ကိုလာမတားနဲ့”
ပီးတော့မှ ဘာဖြစ်လာတယ်လေး၊ ညာဖြစ်လာတယ်လေးမပြောနဲ့နော်
သူ့ဖာသာစားတာ ကျွန်တော့်ကြောင့်ဖြစ်နေဦးမယ် :harr:
မွေးမြူရေးအခန်းကဏ္ဌ (ဂန်ဒပေါင်းတာ မှားနေရင် ပြင်ပေးပါဗျို့ ) တိုးတက်ဖို့ လိုတာလည်း အမှန်ပါဗျာ……
ကျွန်တော်တောင် ကြက်မွေးဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျို့ …….
ဘယ်တော့ရောက်မလဲ မျှော်ဆဲပါဘဲ မောင်ရှုံးရေ…
အမဲ၊၀က် မစားသူမို့ ကြက်ကိုတော့ မျိုးစုံ ကြော်ချက် စားဖြစ်ပါတယ်…
ကြက်ကြော် ကြိုက်သူမို့ မောင်ရှုံးပြောတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို မျှော်လင့်ဆဲ…
ကြက်ကြော် စားချင်ဘူး.. အဆီများတယ်.. အဲ့ဒီ ကြက်သားတွေက အသားပွ စိစိ နဲ့.. သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ခြံထဲမှာ လျှောက်သွားပြီး တီကောင်တွေ ပိုးဟပ်တွေ ရှာစားတဲ့ ကြက် ရဲ့ အသားမှ စားကောင်းတာ..
အဲဒါတွေစားတဲ့ ကြက်က ပိုချိုတယ်ဆိုတော့ အဲဒါတွေချည်းပဲ စားရင် ပိုမချိုဘူးလားဟင်ဟင်ဟင်
မောင်ရှုံး.. တွေ့ကရာ ရေ မသောက်သင့်ဘူး ရေစစ် နဲ့ စစ်ပြီးမှ သောက်သင့်တယ်။ အဲ့လိုပေါ့.. စစ်ပြီးမှ စားတာ ပိုကောင်းတာပေါ့အေ.. ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား
အိုဘဲ့… ကြက် :harr:
အဲဒီ KFC ကိုတော့ရနိုင်တဲ့နေရာရောက်ရင်စားဖြစ်တယ်. အဲဒီအစာတွေက ၀ိတ်တက်စေတာသိပေမယ့်အရမ်းကြိုက်တယ်.. အာလူးချောင်းကိုလည်း ဒီမှာလတ်လတ် ဆတ်ဆတ် လုပ်စားလို့ရပေမယ့် Frozen Chips တွေက ပိုကျွတ်လို့ မှာစားဖြစ်တယ်.. တကယ်တော့ မြန်မာပြည်က မြန်မာကြက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သေးသေးကွေးကွေး ပိန်လှီလှီလေးတွေက အဲဒီကြက်ဖက်တီးတွေနဲ့ယှဉ်စားကြည့်ရင် အများကြီးပိုချိုတယ် ဆရာရဲ့.. ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းပိုညီညွတ်တယ်..
ဦးကြောင်က မြန်မာကြက်လို စလင်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချိုမွှေးလေးပါကွယ်.. စားဂျင်ဗူးလား… အားနာနဲ့နော် ခရစ်စတယ်လေး တဝဂျီးသာစား။ ဟိုကောင် မောင်ရှုံးက မွေးမြူရေးကြက်ဖက်တီး အသားပွစိဂျီး၊ သွားမစားနဲ့ အနားကပ်လာရင်လည်း ရိုက်ထုတ်.. ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးက သူ့ဆီကလာမှာ..။
အမေရိကန် ကြောင်သားက ပွစုပ်စုပ်ကြီးနဲ့… ဘယ်လိုစားကောင်းမှာတုန်း
သူပြောတာ မယုံနဲ့ဗျို့… သူက စားနေကျ ကြောင်ဖားကြီး.. သူကပဲ ပြန်စားသွားမှာ
၃၄၀ ဒီဂရီမှာ ၁၄ မိနစ် ထဲ့ကြော် တာတော့ သိရပါပြီ
Marination (အရသာ ပေါင်းခံခြင်း) ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးများအသေးစိတ် သိလို့ရရင် သိချင်ပါသေးတယ် ။
KFC ရဲ့ အဓိက ကြက်သားအရသာ ကို ဘယ်လိုရသလဲ သိချင်လို့ပါ ။
ဂလိုရှိတယ်ဗျ… Marination လုပ်တယ်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ အချိုဆိုလဲ အချိုအလျောက်၊ အစပ်ဆိုလဲ အစပ်အလျောက်ပေါ့၊ အသင့်ထုပ်ပိုးပြီးသား အထုပ်တွေကို ရေနဲ့ သတ်မှတ်အချိုးအစားအတိုင်းရော၊ ပြီးမှ လည်ပါတ်နေတဲ့ တိုင်ကီလိုအလုံးကြီးထဲထည့်ပြီး ၂ နာရီခန့် ကြက်သားတွေကို လည်ပါတ်စေရပါတယ်။ အဲလိုပြီးရင်တော့ ထုပ်ပိုးပြီးဆိုင်တွေကို ပို့တယ်ပေါ့။ နောက်တော့ ဂျုံမှုန့်တွေထဲကို နို့မှုန့်နဲ့ ကြက်ဥအရော၊ ဆား၊ သစ်ဥသစ်ဖုတွေကို ရောထားတဲ့ Seasoning ကိုရောနှောပြီးတော့မှ နည်းစနစ်ကျကျ ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်လိုက်ရာမှာတော့ လူအများစားသုံးနေတဲ့ ကြက်ကြော်ကောင်းကောင်းကို ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း။
အူးလေးစိုင်း..ခညာ.. ကျနော် လူ့ဘ၀မှာ အစားအများဆုံးအသားက
ကြက်သားဘာ… မွေးထဲက ခြေလေးချောင်းသားမစားတဲ့
ကွန်ဆားဗေးတစ် ပါးပါးနဲ့မားမားကြားမှာ ကြီးလာတော့..
KFC ကို ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အားပေးပါတယ်…
ကြက်ကျော်အပြင်တခြား ထမင်းနဲ့တွဲဖက်တာတွေပါ စားဖြစ်ပါတယ်..
အဲ့လိုကက်စတမ်မှာကို အူးလေးစိုင်း ပွိုင့်တွေ ပရိုမိုးရှင်းပေးလိုက်
ပါလားဂျာ… မိန်းမယူဖို့ စုနေလို့ဘာ… အဟဲ..
ကိုပင်လယ်ပျော်ကြီးလဲ အစားအများဆုံးက ကြက်သားတဲ့
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အားပေးနေတယ်ဆိုတာတော့ ယုံပါပေတယ်.. သင်္ဘောသီးမလား.. ပွိုင့်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘွတူတွေပါပဲဗျာ.. Oversea သမားတွေဆို တဂျီးက ဘယ်လောက်ရေးရေး ပွိုင့်မတိုးပေးဘူးတဲ့.. ခုလောက်အကြာကြီးရေးလာတာမှ ပွိုင့် တစ်သောင်းခွဲတဲ့ :'(
KFC ကြက်ကြော် စားချင်စိတ် ပေါက်လာပြီ …
ရန်ကုန်မှာ ဘယ်တော့များမှ KFC ဆိုင်ခွဲဖွင့်မလဲမသိ … ဖွင့်တာနဲ့ အားပေးဖို့ စောင့်နေပါတယ် ..
” ကြက်တစ်ကောင်လုံး ခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်ပြီးသည်မှ ၉ ကျပ်ခန့်သာကျလေသည်။
1 ဒါဟန်း = ၂၃၁ ကျပ် ဖြစ်သည်။ ”
ကြက်တစ်ကောင် ကို ၂၀၀၀ လောက်ပဲ ကျတာပေါ့ ။ ဈေးပေါသားပဲ ။
အဘ ခဏခဏ ပြောခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်က ကုန်ဈေးနှုန်းက ယိုးဒယား ထက် ကြီးပါတယ်လို့ ။
မြန်မာပြည်က ကုန်ဈေးနှုန်းက စင်္ကာပူ ကို မှီတော့မယ် ။
င်္FR လိုပဲ ကျမလည်း လိုက်တွက်ကြည့်နေတာ။
မြန်မာပြည်က စိုက်ပျိုးရေးတိုင်းပြည်ဆိုပြီး တခါတလေ ငရုတ်တွေ၊ ကြက်သွန်တွေတောင် အပြင်က သွင်းနေရတယ်။
အဲဒါတွေဝယ်ဖို့..ငွေက.. မြေကြီးထဲကသယံဇာတထုတ်ရောင်းတာကလာတယ်.. အမတော်ရဲ့..
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာလေ..။ :buu:
ဆပ်စီးဒီးယားဒီးချစ်ကင်းကတော့ အတော်အောင်မြင်တဲ့ ကန်ပိန်းပါပဲဗျာ…
ဂျပန်က..အသိတယောက် ကြက်မွေးမယ်လို့.. မြန်မာပြည်သွားတော့. တဆွေလုံးတမျိုးလုံး.. အသိတွေပါမကျန်.. သူများအသက်သတ်တာတဲ့.. အကုသိုလ်အလုပ်တဲ့..
အဲဒါက ဟိုအရင်ခေတ်ကတည်းက မြန်မာတွေ စားလာကြတယ် ထင်ပါတယ်
(ကိုကြီးကျော်တင်ရင် ကြက်ကောင်လုံးကြော်နဲ့ တင်တာလေ သိကြားမင်းကျ ဘာမှ မပါဘူး)
ကိုရင်စိုင်းလဲ အဲဒီကြက်ကြော်ကို မြန်မာပြည် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ယူပြီးတော့ မရောင်းချင်ဘူးလားလို့
ကြက်ကြော်ရောင်းတဲ့ သူ.အလုပ်ကို သေသေချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် analysis လုပ်ပြသွားနိုင်ပြီး.. မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် စဉ်းစားတွေးပေးသွားတဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ.ဖြိုးဖို.အချက်တစ်ခုကို ပြောပေးသွား တာ ကြိုက်မိပါတယ်..
နိဂုံးလေးကို အခုလတ်တလေဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို သရော်သလိုလိုနဲ. အဆုံးသတ်လေးလဲ လှပါတယ်..
ဖတ်နေရင်း သူတို.လုပ်နေတဲ့ ကြက်ကြော်လုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားလာပြီး အခုကို ထလုပ်ချင်လာရောင် ရေးပြ တင်ပြနိုင်စွမ်းကို လဲ ကြိုက်မိပါတယ်ဗျာ………
အဲဒီနေ့က ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး… ကြက်သားစားတာ မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တဲ့ ကိုနွေဦးရေးထားတာလေး ဖတ်လိုက်မိတော့ နှစ်လလောက် စာမရေးဖြစ်တာကနေ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရေးလိုက်တယ်ပေါ့.. ရေးရင်း ရေးရင်း လက်တွေ့သွားတာနဲ့ ဆက်ရေးသွားဖြစ်ပါတယ်…
ဆိုတော့ကာ.. လစဉ်ဖြစ်နေကျအတိုင်း ရွေးကျန်ကြီးအဖြစ် အရွေးခံရတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ပျော်တာပေါ့.. ဆုတန်းတော့ မ၀င်ပေမယ့် ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာ၊ ကိုယ်တင်ပြလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မီးမောင်းထိုးပြခံလိုက်ရသလိုရှိလို့ နည်းနည်းတော့ ကျေနပ်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်တွေထုတ်ပြတော့မှ တစ်ယောက်ပဲ ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးချင်တာလေးတွေ ရှိရင်တော့ ရေးနေဦးမှာပါပဲ။
သူများရေ/မြေမှာ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ သူများလူမျိုးတွေစီးပွားရေးအရ အောင်မြင်နေတာ၊ သူတို့လူမျိုးတွေ သင့်တော်တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားသောက်နေနိုင်တာမြင်မိပြီး စိတ်ထဲရှိတာလေး ချရေးပြလိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်းကြသော ဖတ်ရှူသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါကြောင်း…